Maungtintyin: နိုင်ငံရေးသည် သာမန်မျှအနေဖြင့်
သင်ဟာ ညဏ်ရည်ညဏ်စွမ်းရှိလျင်- ဘာ့ကြောင့် သင်ဟာ အာဏာခြေရှုပ်မှုအတွင်း ရှိသင့်သလဲ? ဒါက စဉ်းစားညဏ်ကင်းမဲ့လို့- သာမညောင်ညဖြစ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ညဏ်ရည်ညဏ်စွမ်းရှိတဲ့သူဟာ ပြုလုပ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အရာ များစွာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူများကို စိုးမိုးချယ်လှယ်ရာမှာ သူ့ကို စိတ်ဝင်စားစေလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ။ သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုလုံးဟာ “သူကိုယ်တိုင် သိရှိခြင်း”မှာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အခြားသူများကို စိုးမိုးဖို့ဟာက- မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင် အတွင်းအဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့မှု- အတွင်းတန်ဖိုးမဲ့မှု- ပြီးတော့ အနှစ်သာရမဲ့မှု အယောင်ဆောင် တုပမှုများမှ- လွတ်မြောက်ခြင်း- ရှောင်တိမ်းခြင်းရဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိမှ လွတ်လမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ညဏ်စွမ်းညဏ်စရှိတဲ့သူဟာ လွတ်မြောက်သူတစ်ဦးတော့ မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံရေးဟာ လွတ်မြောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့လွတ်မြောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင်ကိုယ်တိုင်အတွက် မိနစ်အနည်းငယ်တောင် မတွေ့ရှိနိုင်- ဆိုတာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း- အဲဒါက အဲသလို သင့်ကို မအားမလပ်ဖြစ်အောင် အလုပ်များစေပါတယ်။ သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။
သင် အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်- သင် နိုင်ငံရေးကို စဉ်းစားစိတ်ကူးပါတယ်။ ဒါက သင့်ရဲ့အိပ်မက်များကို မပြတ်တမ်း သွားစေ ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ၂၄-နာရီအလုပ်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ စိတ်အေးလက်အေး အပန်းမဖြေနိုင်ပါ။ အကြောင်းက သင်ဟာ အပန်းဖြေနားနေလျင်- သင့်ကို နောက်မှာ ချန်ရစ်ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက “သန့်ရှင်းသော အကြမ်းဖက်မှု” ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာ နိုင်ငံရေးမှာ အလည်မလာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဟာ ရိုးသားလျင်တောင်- အဲဒါက အကျိုးအမြတ်ပေးမှသာလျင် သူဟာ ရိုးသားပါတယ်။ ရိုးသားမှုရဲ့အဖြစ်သက်သက်အတွက် မဟုတ်ပါ။ “ရိုးသားမှုဟာ အကောင်းဆုံး ပေါ်လစီ- ဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားကို- နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်က တီထွင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ရိုးသားမှုဟာ ပေါ်လစီတစ်ခု ဖြစ်လာလျင်တောင်- ရိုးသားမှုက ဘယ်လိုပေါ်လစီတစ်ခု ဖြစ်နိုင်မလဲ?
ရိုးသားမှုဟာ ဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်လစီတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သင်ဟာ ရိုးသားခြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုသက်သက်အတွက် ရိုးသားစင်ကြယ် ပါတယ်။ သင်ဟာ အရာရာကို ဆုံးရှုံးရမည်ဆိုလျင်တောင် သင်ဟာ ရိုးသားပါတယ်။ ဒီအတွက် အရာရာကို ဆုံးရှုံးခြင်းကို ထိုက်တန်ပါတယ်။
ရိုးသားမှုဟာ ဘယ်တော့မှ ပေါ်လစီတစ်ခု မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးက အရာရာကို ပေါ်လစီတစ်ခုဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ရိုးသားတဲ့လူတစ်ဦးလား? ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါ။
Strange- အမည်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်က သူရဲ့သေအံ့မူးမူးအချိန်မှာ စီစဉ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လော်ရာကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ “သချိုင်းဂူကမ္ဗည်းကျောက်စာမှာ သင်္ချိုင်းစာတစ်ခုအဖြစ်- ဒီနေရာမှာ ရိုးသားတဲ့နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်ကို ထားရှိပါတယ်- လို့- ငါဟာ စကားများ ရှိချင်တာပဲ”- ဆိုတာ ပင့်သက်ရှိုက်ရင်း, ဟောဟဲလိုက်ရင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“အဲဒီကျောက်တုံးအောက်မှာ မြုပ်ထားတဲ့သူကို လူတွေက ဘယ်လိုသိပါမလဲ?” လို့ လော်ရာက ပြန်လှန်ချေပခဲ့ပါတယ်။ အဘိုးအိုက အမြော်အမြင်ရှိစွာ ခေါင်းညိတ်ပါတယ်။ “မစိုးရိမ်ပါနဲ့”-လို့ အကြံပြုပါတယ်။ “လူအများက အဲဒီစကားလုံးများကို ကြည့်ဖို့ ယူပါလိမ့်မယ်။ သူတို့အားလုံးပြောဆိုပါလိမ့်မယ်။ “ဒါက Strange”-ပဲ။ ပြီးယင် Strange- ဟာ နိုင်ငံရေးသမားရဲ့ နာမည် ဖြစ်တယ်!……
ရိုးသားမှုဟာ အသည်းအူ ကလီစာ အခရာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားဟာ မျက်နှာဖုံးများ ဆင်မြန်းတပ်ဆင်ရပါမယ်။ သူဟာ လူအများ ရဲ့ မျော်လင့်ချက်များကို ဖြည့်စွမ်းရပါ့မယ်။ ဒါကြောင့် သင်လိုချင်တဲ့ဘယ်အရာမဆို- သူဟာ အဲဒါတွေ ဖြစ်ဖို့ ဟိတ်ဟန်ထုတ်ပါတယ်။
သင်လိုချင်တဲ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါကို မျော်လင့်ချက်ပေး ကတိပြုဖို့- အဆင့်သင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ခြားနားတဲ့ သူများသို့ ရှေ့နောက်မညီတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာများကို မျော်လင့်ချက်အလားအလာပေးလျှက် ဆက်လက်သွားနေ ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကတိပြုမှု အတိတ်နိမိတ်ဟာ “nothing” လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးက ဒီနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ညည်းညူကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်- သူဟာ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ့ အာဏာစက်လက်ခုပ်တွင်းရဲ့အပြင်ထွက်လျင်- ချက်ချက် သူဟာ အခြားလှောင်ချိုင့်တစ်ခုထဲသို့ ၀င်တယ်- ဆိုတာ ဘယ်နည်းနှင့်မဆို သူဟာ အလွန်မိုက်မဲပါတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့မိုက်မဲမှု စိတ်မှ လွတ်လပ်ရပါ့မယ်။ (အဲဒီနောက်မှသာလျင် နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ပတ်သက်လို့ အချုပ်အချယ် ကင်းပါလိမ့်မယ်။)
ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံရေးသမားများဟာ သင့်ကို အသိညဏ်ပညာကျယ်သူ မဖြစ်စေချင်ပါ။ နှစ်ပေါင်းထောင်များစွာကြာအောင် အဲဒါတွေက အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်- ပညာတတ်ဖြစ်ဖို့- သူတို့ဟာ လူအများကို ခွင့်မပြုခဲ့ပါ။ ယခု သူတို့ဟာ လူတွေကို ပညာတတ်ဖြစ်ဖို့ ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာက သင့်ကို ညဏ်စွမ်းညဏ်စ ကင်းအောင် ပြုလုပ်တဲ့- အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ ကျောင်းကို ၀င်ရောက်တဲ့အခါ- တက္ကသိုလ်မှပြန်လာတဲ့အခါမှထက် အသိပညာပိုဝေးသွားပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ပေါင်း ၂၀-မှာ အလွန်းကြီးမာစွာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာများစွာကို ဖျက်ဆီးပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ စကားလုံးတွေ- ဗန်းစကားတွေ- သီအိုရီတွေ- ဗဟုသုတတွေ သယ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ အသက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ဗဟုသုတ“dead knowledge”မျှသာ အိမ်ကို သယ်ဆောင်လာ ပါလိမ့်မယ်။
မျိုးဆက်ဟောင်းတွေက မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့စိတ်ကို ပုံစံခွက်ထဲသွင်းဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဆရာဟာ မျိုးဆက်ဟောင်းရဲ့ အေဂျင့်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အေဂျင့် ဖြစ်ပါတယ်။ (သူဟာ မျိုးဆက်သစ်များရဲ့စိတ်ကို ဖျက်စီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် -သင်ဟာ တကယ် သတိမထားလျင် ဂရုတစိုက်မကြည့်လျင်- သင်ဟာ သိလာလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ- အဲဒီလိုမျိုး ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ဖျက်ဆီးခြင်းကို ပြုလုပ်ပါတယ်။)
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Thursday, October 27, 2011